Ny fitsidihana an'i Myanmar izao dia azo antoka ary “ny zavatra tsara tokony hatao”
Home » Travel Associations News » Ny fitsidihana an'i Myanmar izao dia azo antoka ary “ny zavatra tsara tokony hatao”
Myanmar Marketing Marketing dia te-haneho ny fanohanany ireo olona nafindra toerana rehetra ao amin'ny Fanjakan'ny Rakhine Avaratra sy Bangladesh taorian'ny olana farany teo akaikin'ny sisintanin'i Bangladesh. Manantena izahay fa ny olona rehetra avy amin'ny fivavahana sy ny firazanana rehetra dia hahita toe-javatra azo antoka hipetrahana.
Mihoatra ny 2000 kilaometatra mahery avy eo avaratra ka hatrany atsimo i Myanmar ary manana toetra, kolontsaina ary zava-mahavariana mahatalanjona atolotra ho an'ny mpizahatany. Izy io koa dia iray amin'ireo firenena tia mandray sy sariaka indrindra eran'izao tontolo izao ary azo antoka fa azo tsidihina raha mbola mijanona ao anaty faritra maitso ianao. Ireo faritra maintso ao amin'ny sari-tany nomen'ny UK Foreign Office azo antoka ny fivezivezena ary hahatonga anao ho be atao foana na dia hatramin'ny 6 herinandro aza satria ny 90% amin'ireo tranonkala mpizahatany malaza dia miorina ao amin'ny faritra maitso.!
Mino hatrany izahay fa ny fizahantany dia fomba tsara hampifandraisana ny olona ary hitondra fampandrosoana manerana an'i Myanmar ho an'ny olona avy amin'ny firazanana sy fivavahana rehetra ary miantso ny mpizahatany eran'izao tontolo izao izahay mba hanohy hitsidika an'i Myanmar. Ankehitriny indrindra dia zava-dehibe ny fandraisana fanapahan-kevitra am-pahalalana ary misafidy ny hanohana ny olona rehetra ao amin'ny firenena. Tsapan'ny MTM fa ny fizahan-tany any Myanmar dia mbola eo am-piandohany ary tsy afaka mahatratra faritra sy olona voafetra ihany, kanefa zava-dehibe ny fanohizana mandroso sy mampivelatra ny fizahan-tany maharitra eto amin'ny firenena. Ny fizahantany dia mandray anjara betsaka amin'ny fampihenana ny fahantrana (Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany) ary araky ny Banky Iraisam-pirenena dia "nihena ny fahantrana teo anelanelan'ny 2009-2010 sy 2015" Banky iraisam-pirenena - topy maso ny firenena Myanmar.
Myanmar dia manolotra faritra tropikaly, tendrombohitra, farihy, tempoly ary kolontsaina taloha, sakafo mahafinaritra, torapasika tropikaly ary ankamaroan'ny mponina tena mandray olona.
Ny tetik'asa fizahan-tany mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina dia novolavolaina nanerana ny firenena toy ny ohatra ao amin'ny Kayah State hiantohana fa samy mpizaha tany sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana no samy mandray soa amin'ny zavatra niainany.
Miantso ny olona eran'izao tontolo izao izahay mba hanohana ny olona REHETRA na avy amin'ny firazanana, na ara-pinoana, na ara-poko amin'ny fomba milamina ary ho avy hitsidika an'i Myanmar izao satria hanampy amin'ny fampihenana ny fahantrana manerana ny firenena izany ary hanampy amin'ny fananganana fiarahamonina milamina sy milamina ao Myanmar.
Manantena ny fivarotana fizahan-tany ao Myanmar fa hisy olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hitsidika an'i Myanmar ary hahafantatra ny tena firenena sy ny mponina ao aminy ary hahazo aingam-panahy amin'ity toerana mahafinaritra ity.
Fanavaozana ny rivodoza ao amin'ny Hyatt Centric Key West Resort & Spa
Swiss Belhotel Al Aziziya Makkah ao Arabia Saodita amin'ny fanaovana azy